E-mail ပို့တဲ့အခါ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် အချက်များ။ - Sharemal
သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း e-mail ပို့တာဖြစ်ဖြစ် မိသားစုအချင်းချင်း e-mail ပို့တာတွေက မထူးဆန်းပေမယ့် အလုပ်ခွင်မှာ ကိုယ့်အထက်လူကြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စာပို့တာဖြစ်ဖြစ် clients တွေဆီကို စာပို့တာဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ပို့တဲ့စာက impression မကောင်းရင်တစ်ဖက်က အထင်သေးသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ရုံးမှာဆို နောက်ဆုံးမှာ Thank You ဆိုတဲ့စာမရေးရင် အလုပ်တောင်မခန့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် e-mail ရေးတဲ့အခါတိုင်း အဆုံးမှာ Thank You for your time/ thank you for reading စသဖြင့် ရေးပေးပါ။
၁။ Professional e-mail address သုံးပါ။
ဥပမာ ကိုယ့်နာမည်အပြင် cuttie , lay, lovely စသဖြင့် အဲ့လိုစကားလုံးတွေကို email-address မှာရှောင်ပါ။ ဥပမာ သင့်ရဲ့နာမည်က​ mgmg ဆိုပါစို့။ [email protected] က အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် [email protected] ဆိုရင်တော့ email address ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင် သင်က ကလေးအရမ်းဆန်ပြီး မရင့်ကျက်ဘူးဆိုတာကို လူတွေထင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဦးဆုံး email-address ကို ဂရုစိုက်ပါ။
၂။ Reply all ကို အမြဲသုံးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ဥပမာ သင့်အလုပ်က group ဖွဲ့ပြီး email ကို အားလုံးပို့တဲ့အခါမျိုးမှာ ပြောစရာသိပ်မရှိပဲနဲ့ reply ပြန်နေတာကလည်း အခြားလူတွေကို ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလိုအပ်ပဲနဲ့ reply ပြန်တာမျိုးကိုရှောင်ပါ။
၃။ အမှတ်အသားကို အသုံးပြုပါ။
E-mail ရဲ့အောက်တိုင်းမှာ သင့်နာမည်နဲ့ company လိပ်စာ၊ ရာထူးတွေပါပါစေ။ ဒါမှ တစ်ဖက်လူက သင့်စာပို့တိုင်း သင့်ကို အမှတ်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ (!) ကိုရှောင်ပါ။
E-mail ပို့တဲ့အခါမှာ ! ထည့်တာက စာဖတ်တဲ့လူကို တစ်မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ ရိုင်းရာလည်း ကျပါတယ်။ အပြင်မှာ sign သဘောနဲ့ ပြတာမျိုးက ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်း စာပို့တဲ့အခါမျိုးမှာ တစ်ဖက်လူက တစ်မျိုးထင်သွားပါလိမ့်မယ်။
အပြင်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင် စကားပြောတဲ့အခါ ဟာသပြောတာမျိုးက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်ပေမယ့် e-mail ပို့တဲ့အခါမှာ ဟာသတွေပြောတဲ့အခါ သင်ပြောချင်တဲ့အရာကို တစ်ဖက်လူက နားမလည်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် email ပို့တဲ့အခါ ဟာသပြောတာမျိုးကို သတိထားပါ။
၆။ Culture ကိုသိအောင် လုပ်ပါ။
Culture က လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ သင်က Malaysia က လူကို e-mail ပို့တယ်ဆိုပါစို့။ သင်က Malaysia က အကြောင်းတွေအကုန်မသိရင်တောင် မလေးလူမျိုးတွေ မကြိုက်တဲ့ဟာကို သိထားရပါမယ်။ ဒါတွေကို ရှောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် သင်နဲ့ သူတို့နဲ့ နားလည်မှုကောင်းကောင်းတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်။
၇။ Tone မှန်ပါစေ။
စာပို့တဲ့အခါမှာ စကားပြောသလို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး အသုံးနှုန်းတွေသုံးပါ။ English လိုရေးတဲ့အခါမှာလည်း reference တွေများများဖတ်ပါ။ သူများရေးတဲ့ tone style အတိုင်း အတုယူရေးပါ။ အရမ်းမာတဲ့Tone လိုမျိုးမရေးပါနဲ့။